Home - Prateek Nepal
एजेन्सी । विवाह मण्डप एकाएक रणभूमी बन्यो भने के होला रु यस्तै घ’टना भारत पंजाबको तरन तारनमा भएको छ । जब दुलहा र दुलही विवाहको लागि पार्टी प्यालेस पुगे । उनीहरु राजमार्गको माही पैलेस माही रिसोर्टको बाहिर विवाह कार्यक्रमको बाँकी कार्यक्रमको लागि त्यहाँ पुगेका थिए । तर प्रहरीले उनीहरुलाई हलमा जानवाट रोके । आफ्नै विवाहमा […]
January 19, 2021 Ramash kunwar
भारतीय रक्षामन्त्रीले भने, ‘नेपाल हाम्रो भाई हो रिसाए पनि फकाउँछौं’
हास्यकलाकार ‘राता मकै’ लाई यो के आइलाग्यो ?
काठमाडौँ / राता मकैको नामबाट प्रख्यात कलाकार किरण केसीलाई आ’पत आइलागेको छ । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (क्रा’न्तिकारी माओवादी) ले राता मकैको चितवनको माडीस्थित ४० बिघा जग्गा कब्जा गरेको हो । वैद्य माओवादीले शनिबार केसीको प्लटिंग गरिएको जग्गामा पार्टीको भण्डा तथा ब्यानर गाडेर कब्जामा लिएको घोषणा गरेको छ। माडी नगरपालिका २ स्थित पौहारीमा रहेको […]
बाध्यताले दोश्रो बिवाह गरेकी नायिका स्वेता खड्का बिहे पछि किन आइन वि’वादमा पूरा पढनुहोस्
टिका सानुको बिहे मिति पक्का भो ! दाईले यस्तो केटा खोजे ! टिका धुरुधुरु रोईन, को हुन् त, बेहुला ?
January 20, 2021 January 20, 2021 Ramash kunwar
काठमाडौँ / चितवनमा एक युवती आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अर्कैसंग विवाह गरेर गइन् । उनका श्रीमान युट्ुवरलाई लिएर आफ्नो श्रीमती लैजानेलाई खोज्न हिँडे । उनीहरुले ति जोडीलाई वुटवलमा फेला पारे । तर दिन वित्दै जाँदा घ’टनाले अर्कै रुप लिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका शिवनवरमा भएको घ’टनामा नयाँ ट्वीष्ट खुलेको हो । सानै उमेरमा बुवा आमाले […]
दाईलाई मा’रे, न्याय माग्दा सबै मिलेर घर घेर्दैछन्, अब बाबा-आमालाई कसरी बचाउने भन्दै दिदीबहिनी
नेपालको कुनै पनि शोरुममा नपाइने पूर्वयुवराज पारसले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ?